China Nke Abụọ Ọgbọ 30-inch unyi imi ihe Imeputa na Factory | Chuliuxiang
Ọgbọ nke abụọ 30-anụ ọhịa unyi grill
Nri ụtọ unyi na CLUX Charcoal Grill. Ihe nkedo a na-esi esi nri nke ejiri aka ebuli na-eme ka ịbu unyi mbụ dị mfe. Gbanwee okpomọkụ site na iji nkata ebuli unyi maka hamburgers ma ọ bụ steak esichara nke ọma.
Igwe ọkụ carbon 30-inch ọhụrụ emebere agbakwunyela ọrụ ọhụrụ n'ihe gbasara ọdịdị na ọrụ, ebe net grilling buru ibu ka ọ dịbu.
Ọhụrụ imewe n'èzí esi nri unyi
Ngwa panel Igwe anaghị agba nchara
Nha ngwaahịa 860*600*480mm
Ebe nri 1296*213mm
Ụdị onye na-ese anwụrụ ọkụ grills
Nke a na-esi na nnukwu ọkụ na-eguzogide ihe igwe anaghị agba nchara, ihe siri ike na nke ọma na-eguzogide ọgwụ, ọ dịghị nchara, ọ dịghị mgbagwoju anya, na-adịgide adịgide na ogologo oge, na-adịghị emerụ ahụ mmadụ, na-eji ọtụtụ afọ na-enweghị nsogbu. Dị mma dị ka obere unyi grill n'èzí maka ịma ụlọikwuu, grills nri n'èzí, ubi camping grill smoker, picnic na tailgating barbeque grill.
IHE GRATE-IN-GRATE-SYSTEM nwere ọgụgụ isi - N'ihi usoro grate-in-grate nke trolley grill, nke nwere ike ịgbasa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ruo mgbe ebighị ebi, ihe ọ bụla grill nwere ike imezu na, n'etiti ihe ndị ọzọ, wok na-atọ ụtọ, ihe oriri ma ọ bụ poteto poteto. ka ekweta.
Ọkwa COAL AKWỤKWỌ & EXTRA SHELF - Ọkwa unyi na-agbanwe agbanwe na-eme ka njikwa kacha mma nke ọkụ ọkụ. Uru ọzọ nke cart grill grill bụ ohere nchekwa agbakwunyere nwere nko dị n'akụkụ iji chekwaa nri esiri esi, ngwa nri, na arịa grill.
IHE ventilashị pụrụ iche - oghere ikuku pụrụ iche nke ihe mkpuchi unyi na-eme ka ikuku ziri ezi n'oge usoro nsị ma gbochie unyi ka ọ pụta mgbe mkpuchi mkpuchi.
NOBLE elele & Ọrụ Pụrụ Iche - Akpa ọkụ nwere ntụ ntụ nwere aka igwe anaghị agba nchara na-enye BBQ grill ọmarịcha anya. Ngwa a na-achịkọta ntụ na aka igwe anaghị agba nchara na mkpọ karama mejuputara atụmatụ nke grill.
MOBILE - wiil ndị ahụ na-eme ka grill grill dị mfe ịkwaga ma kwekọọ nke ọma. N'ihi ụkwụ ndị ahụ siri ike, trolley chacoal grill guzoro n'ọnọdụ ya.
Nke gara aga: 4+1 ọkụ igwe anaghị agba nchara gas bbq grill
Osote: Onye nrụpụta China 24inch dị arọ na-edozi isi nri dị elu unyi BBQ Grill
30 inch unyi imi
griller bbq osisi
anwụrụ combo imi ihe
Agba ọcha seramiiki unyi imi
21 inch seramiiki Pizza oven
Anụ anụ mmanya na-asọ n'èzí
Drum Pit Barrel grill anụ dị arọ
Ọhụrụ mbata trolley unyi imi